रक्सी चुरोट बेचेर व्यापार गर्न हुने ध्यानको व्यापार गर्न नहुने ! (भिडियोसहित) | नेपाल आज
रक्सी चुरोट बेचेर व्यापार गर्न हुने ध्यानको व्यापार गर्न नहुने ! (भिडियोसहित)
साउन ११ । आज भन्दा झण्डै ५६ वर्षअघिको कुरा होे । क्षेत्रपाटीस्थित गणेश मन्दिरमा एउटा बालक भेटियो । बालक भन्दा पनि नवजात शिशु । सालनालसहितको नवजात शिशुलाई कुनै एक परिवारले उठाएर लग्यो र आफ्नै सन्तानजसरी पालणपोषण गर्यो । त्यही मन्दिरबाट ती बालकको भविष्यका रेखाहरु कोरिन थालिसकेका थिए । किनभने त्यसै दिनबाट उनले नयाँ जीवन जो पाएका थिए ।
सानैदेखि ती बालकमा फरक प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । उनको व्यवहारले सबैलाई चकित बनाउँथ्यो । कतिपयले उनलाई भेटेर ल्याएको बालक भन्ने गर्थे । समाजमा कसले के भन्छ भन्ने कुनै मतलव नराखी ती बालक आफ्नो सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्थे । कल्पना गर्न र सोच्नको लागि उनलाई सम्पन्न परिवारको कुनै जरुरत थिएन । उनलाई पालिरहेको परिवारका पनि आफैँमा धेरै समस्याहरु थिए । उनीसँगै अन्य बच्चाहरुलाई पनि हुर्काउन समस्या नै थियो । यस्ता विविध समस्याको भकारीमा परेर पनि उनी आफूमा भएको आत्मविश्वासलाई डगमगाउन दिँदैनथे । उनको भित्री विश्वास यति बलियो थियो, कसैले धम्क्याएर त्यसलाई भत्काउन सकिदैनथ्यो ।
पढाइमा तिक्ष्ण थिए । पढाइमा राम्रै लगनशीलता थियो । उनी राम्रो पेन्टिङ पनि गर्थे । पेन्टिङकै कारण उनी १६ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय पेन्टिङ प्रतियोगितमा भाग लिन रसिया जाने मौका पाए ।
हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेजस्तै उनी आफूमा भएको खूबीलाई तिखार्दै गए । सरल रुपमा चलिरहेको जिन्दगीमा नपत्याउँदो समस्या आइलाग्यो । उनी रोगको शिकार भए । तर, त्यो रोगले उनलाई मानसिक रुपमा क्षति भने पुर्‍याउन सकेन । आत्मविश्वास बलियो बनाएर भारत गए । ६ वर्षको भारत बसाईमा उनले योग सिके । योगले नै उनलाई रोगमुक्त बनायो । त्यसपछि उनमा नयाँ आयाम थपियो, नेपाल गएर अरुलाई पनि योग सिकाउने । नेपाल फर्किएर ‘संसार बदल्नु छ, सुरु आफैँबाट हुनुपर्छ’ भन्ने नारासहित मनोक्रान्ति नामको अभियान चलाए । आज त्यो अभियानले हजारौँ मानिसलाई योगमा आकर्षित गरेको छ । आज उनी जे छन् योगकै कारण छन् ।
चर्चा भएको व्यक्ति हुन् योगी विकासआनन्द । नेपालमा दर्शन, योग , विज्ञान र मनोविज्ञानको कुरा गर्दा उनको नाम छुट्दैन । मानिसलाई दर्शन सिकाउने योगी आफैँको जीवन एक खुल्ला किताब हो । क्षेत्रपाटीको गणेश मन्दिरमा भेटिएका उनी आज धेरैका लागि पथ प्रदर्शक बनेका छन् । आज उनी मनोक्रान्ति मार्फत धेरैलाई योग सिकाउँछन् । नेपालका दुर्गम ठाउँबाट पनि मानिसहरु उनको दर्शन सुन्न र उनीसँग योग सिक्न आउने गर्छन् । योगकै माध्यमबाट धेरैजना रोग र मानसिक समस्याबाट मुक्त भएको पनि उनीसँग उदाहरणहरु छन् ।
बेलाबेलामा उनी पनि विवादमा आइरहन्छन् । कहिले कृष्णदास महाराजलाई ठग भनेर त कहिले ध्यानको नाममा व्यापार गरेको भन्ने आरोप लागेर । तर, यसपटक भने उनले यसबारेमा खुल्ला रुपमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । बेलाबेलामा उनलाई पनि ध्यानको व्यापार गरेको आरोप लागने गर्छन् । यसो भनेर सोधिरहँदा उनले भने, ‘जाँड रकसी र चुरोटजस्ता नराम्रा चिज बेच्दा केही भएन, मैले ध्यानको व्यापार गर्न नपाउने ? हामीले पैसा लिएर त्यसवापत सेवा दिने गरेको छौं । पहिला सित्तैमा सिकाउँदा पनि नसिक्ने ध्यान अहिले मानिसहरु आफैँ पैसा तिरेर सिक्न आउँछन् ।’
मनोक्रान्ति अभियान चलाएकै कारण ध्यानको व्यापार गर्यो भन्ने टिप्पणीहरुलाई उनको सुझाव छ, ‘ध्यानको व्यापार गरें भन्नेहरुले एकपटक मनोक्रान्ति आइदिनुहोला, हेरिदिनुहोला यहाँ कस्ता सेवा दिइन्छन् । तबमात्र टिप्पणी गरिदिनुहोला ।’
manokranti dr yogi bibekananda
अनुमति बिना सञ्चालन गरेकोले अटो रिक्सा प्रहरी नियन्त्रणमा